XOG: Donnarumma oo ay hor taallo inuu kala doorto Milan & wakiilkiisa Raiola – Gool FM
(Milano) 03 Juunyo 2017 – Donnarumma ayay hor taallaa inuu kala doorto AC Milan ama wakiilkiisa Mino Raiola, iyadoo uu go’aanka Milan haatan u egyahay mid ay ku muujinayso inaysan diyaar u ahayn inay tamar iyo waqti kale kusii lumiso arrintan uu cakirayo Raiola.
Kooxda Rossoneri ayaa goolwalaha u bandhigtay mushahar gaaraya 4.7 milyan oo euro, taasoo ah mushahar wanaagsan marka la eego inuu iminka saxiixayo qandaraaskiisii ugu horreeyay isagoo qaan gaar ah.
Yeelkeede wakiilkiisa oo muddaba kubad dhagax la ciyaarayay Milan ayaa doonaya in qandaraaska muluqan lagu xiro shuruudo dhowr ah oo ay midi dhigayso in uu isagu saami ku yeesho haddii mustaqbalka laacibkan la iibiyo, mid kale ayaa u dhigan in lacag go’an oo hadhoow la fasiqi karo lagu xiro qandaraaska, halka mid kale lagu sheegay mid uu laacibku Milan kaga dhaqaajin karo haddii aysan fasalka soo socda usoo bixin KHY.
“Waxaan doonayaa inaan sii joogo Milan,” ayaa Donnarumma laga soo xigtey mar uu Khamiistii la kulmay maamulka kooxda Via Aldo Rossi, iyadoo ay Milan ay haatan doonayso inuu laacibku jawaab qayaxan la yimaado.
“Milan wax bay hurtay, waxayse Gianluigi Donnarumma ka sugaysaa jawaab deg deg ah.” – ayuu yiri Guddoomiyaha ac Milan ee Marco Fassone.
Maamulka Milan ayaa xitaa la sheegayaa inay diyaar u yihiin inay xiriirka u jaraan gebi ahaanba Raiola oo ay dareensan yihiin inuu yahay daniiste aan wax qiimayn iyo xushmad ah siinaynin, iyadoo ay haatan si isa soo tareeysa xitaa taageerayaasha Milan u dareemayaan in Donnarumma uu khiyaanay kooxdii kusoo barbaartay maaddaama uu ka aamusan yahay sida ay wax u socdaan, iyagoo la dhacsan qaabka uu maamulka cusub ee Milan arrinta u wajahayo.
PremiumSporthd ayaa qoraya in Milan ay Donnarumma kala dooran siinayso inuu gaaro go’aan kala saare ah, isagoo ama Milan dooranaya ama raacaya wakiilkiisa oo loo arko nin damac badan oo wax kasta ka hor marinaya danihiisa balse aan qiimaynaynin xitaa koritaanka laacibka, iyadoo ay Milan durba diyaarisay qorshe 2-aad ay ku raadsanayso goolwale kale haddiiba ay dhacdo inuu laacibkani ka socdo.
Dhanka kale, Milan ayaa haatan isha ku haysa soo afjaridda heshiis uu daafaca Ricardo Rodriguez ku imanayo Milan horraanta todobaadka soo aaddan, iyagoo isla Isniinta ku tala jira inay la fariistaan Alvaro Morata oo ay aad u doonayaan.